लक्षण के हो, कसरी जोगिने : निपा भाइरस के हो ?
निपा भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन नेपालमा पूर्वतयारी थालिएको छ । यो रोगको जोखिम नेपालमा पनि रहेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पूर्वतयारी स्वरुप देशभरका अस्पतालहरुलाई ‘अलर्ट’ हुन बिहीबार निर्देशन दियो ।
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। निपा भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन नेपालमा पूर्वतयारी थालिएको छ । यो रोगको जोखिम नेपालमा पनि रहेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पूर्वतयारी स्वरुप देशभरका अस्पतालहरुलाई ‘अलर्ट’ हुन बिहीबार निर्देशन दियो । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
भारतको केरलामा भेटिएको निपा भाइरसको संक्रमणको अवस्था बारे छलफल गर्दै मन्त्रालयले त्यस्ता केसहरु देखा परेमा विस्तृत विवरणसहित परीक्षणका लागि संकलित नमुना टेकुमा पठाउन अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।
के हो यो रोग ?
निपा भाइरस एक जुनोटिक भाइरस हो । जुन जनावरबाट मानिसमा सर्छ र मानिसको खानाको माध्यमबाट वा प्रत्यक्ष रुपमा मानिसबाट अर्को मानिसमा पनि सर्न सक्छ । यो भाइरसको संक्रमणले मानिसमा कुनै लक्षण नदेखिनेदेखि श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या र अझै घातक समस्या देखिन सक्छ । यो भाइरसको संक्रमणको कारण बङ्गुरजस्ता जनावरमा झन् गम्भीर किसिमका रोग देखिन्छ । जसको कारण विशेषगरी किसानहरुलाई धेरै आर्थिक क्षतिसमेत हुने गरेको छ ।
शरीर, घाँटी र टाउको दुख्ने ।
विस्तारै रिंगटा लाग्ने, लोलाउने र बेहोस हुने ।
शरीर कमजोर हुने ।
नसासम्बन्धी समस्या देखिने ।
शरीरमा एलर्जीलगायतका अन्य समस्या देखिने ।
कसैकसैलाई निमोनिया तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिने ।
मानसिक असन्तुलन पैदा गर्ने ।
लक्षण देखा परेको २४ देखि ४८ घण्टाभित्रै बिरामी कोमामा जान सक्ने ।
डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार यो रोग लागेका १० जना बिरामीमध्ये ५ जनाको मृत्यु हुने गर्छ । यो भाइरसको संक्रमणविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै पनि औषधि र खोप पत्ता लागेको छैन । त्यसैले यो रोग पहिचान भएका स्थानमा चमेरा तथा बङ्गुरको सम्पर्कबाट टाढै बस्नुपर्ने डा. पुनको सुझाव छ ।
निपा भाइरस संक्रमित व्यक्तिको क्लोज कन्ट्याकमा रहेका व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टिनमा राखेर परीक्षण गरी संक्रमण भए नभएको छुट्याएर उपचार गर्नुपर्ने डा. पुन बताउँछन् । यसको संक्रमण भएमा २० देखि ४८ घण्टामा बिरामी कोमामा पुर्‍याउने डा. पुनको भनाइ छ ।
बिरामी निको भए पनि त्यस्तो व्यक्तिको स्नायु प्रणालीमा केही असर भने बाँकी नै रहने उनले बताए । यो भाइरस मानिसमा लागेपछि परीक्षण गर्दा देखिन सामान्यतया ४ देखि १४ दिनसम्म लाग्छ । कुनै कुनै अवस्थामा भने ४५ दिनसम्म पनि लक्षण नदेखिन सक्छ । यो भाइरसको संक्रमणको कारण मृत्यु हुने दर भने ४० देखि ७५ प्रतिशतसम्म पनि हुन सक्छ । मृत्युदर भाइरसको संक्रमणको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक पर्छ ।